Mashiinka Embossing, Mashiinka Duubka ee PVC Automatic - Zhongshuo
Qalabka kaabayaasha ah ee looxaanta ama xarigga xariiqda
SPL-Sheet to Line Polishing Sheet
PGL-shiidida Khadka Polishing ee Meesha culus
Mashiinka Dhameystirka Muraayadda ee Birta Aan Jirin
Mashiinka Dhameystirka Muraayadda ee Xilliga Qulqulka Qumbaha iyo Xaashiyaha
Qalabka Cadayga ee HL Dhamaadka
Ku rakibida aaladda Kooxda Vacuum Cup Group
Mashiinka Duubista ee PVC Automatic buuxa ah
Qalabka Dhaqista & Qalajinta
Korantada iyo Automation-ka ee khadka dhameystiran
CPL waxaa badanaa lagu dabaqaa ka saarida ciladaha yar yar ee iskuxirka duudduuban ee qoyan ee SS qoyan, helitaanka dhammaynta qurxinta, ie No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Kululeyntu waxay noqon kartaa emulsion ama saliida macdanta. Nidaamka shaandhaynta iyo nidaamka dib u warshadaynta ayaa muhiim u ah khadka dhammeystiran. ZS CPL waxaa loogu talagalay isukeeninta qabow isku-talaabinta ah ee isku-wareejinta laga bilaabo 100 illaa 1600 mm ballac ahaan iyo dhumuc u dhexeysa 0.4 illaa 3.0 mm.
Wuxi Zhongshuo Qalabka
Adiga oo kuu ah adiga Tallaabo kasta oo Jidkaaga ah.
Laga bilaabo xulashada iyo habeynta xuquuqda
Mashiin u ah shaqadaada si ay kaaga caawiso maalgelinta iibsiga ee abuuraya faa'iidooyin la arki karo.
CPL waxaa badanaa loo dalbadaa t ...
Xaashi buuxa oo Toos ah ayay u ...
Shiidista Automatic buuxa iyo ...
Xudduudku waa 4 column gantr ...
Mashiinka Dhameystirka Muraayadda ee Loogu Tala Galay Qalabka ...
Nooc wareegsan Waxay khusaysaa ...
Layliyo Scoth-Brite Roller ...
Mashiinkan ayaa badanaa loo isticmaalaa ...
Waxay ka kooban tahay gantry fra ...
Nidaamka waxaa ka mid ah: 2 pneu ...
Sannadkii 2005 waxaan bilownay qaabeynta, soosaarista iyo isku dubarida mashiinnada shiidi weelka birta. Iyada oo la ballaarinayo ganacsiga joogtada ah iyo isbedelka qaab-wadaageyaasha saamiyada, sanadkii 2015 Wuxi Zhongshuo Machines Co., Ltd ayaa la aasaasay.
Shirkaddu waxay ku taalaa magaalada Wuxi City, Gobolka Jiangsu. Magaaladan diiwaangashan waa 8 milyan RMB. Aagga dhismaha wuxuu ka sarreeyaa 7000 m2. Wadarta tirada shaqaalaha ayaa ka badan 60, oo ay ku jiraan 1 Injineer heer cilmiyeed, 2 injineer sare iyo 5 injineer.
Mashiinka Maskaxda ee 2 M oo Wajiyada balaaran oo loogu talagalay Qalabka Khafiifinta ee SS culus
"Waxaad tahay lammaaneyaga muddada dheer lagu kalsoonaan karo": Wuxi Puxin Metal Products Co., Ltd waxay amartay xariiq shiidi weelka bir daxalaya ee birta culus ee uu sameeyay Wuxi Zhongshuo MachZS Mashiinka No. 39, Qunxing Rd, Jan, 2020 - Qandaraas cusub ayaa la bixiyay: On Jan , 10-aad, hormuud ka ah Shiinaha ...
Booqday suun balaadhan oo aad u balaadhan oo loogu tala galay xajiska xaashida Titanium
"Weel balaaran oo balaaran oo balaaran oo loogu tala galay qulqulka xaashiyaha" ayaa lagu qanciyay: Macaamil Shiinees ah ayaa amar ku bixiyay 2 warqad inay xaashiyaha qashinka ka soo saarto Wuxi Zhongshuo Qalabka ZS No. 39, Qunxing Rd, Jan 3, 2020 - Qandaraaska cusub ee la bixiyay: On Dec, 13th 2019, Shirkad caan ah oo ka shaqaysa birta Shiinaha, ayaa xaqiijisay a ...
Qiimaha ugu wanaagsan ee wax soosaarka raashiinka adduunka oo dhan
"Qiimaha ugu wanaagsan ee waxsoosaarka qiimaha waxsoosaarka adduunka" ayaa lagu qanciyay: Macaamiil Talyaani ah wuxuu amar ku bixiyay xaashi si buuxda otomaatig ah inuu ku xareeyo khad ay sameysay Wuxi Zhongshuo Machines ZS Qalabka 39, Qunxing Rd, Dec, 2019 - Qandaraaska cusub ee la bixiyay: Bishii Noofambar, 22-keedii, hormuud Xarunta adeegga birta ee talyaaniga, xaqiiji ...
Nagala xiriir shabakada iibka nala soo xiriir mihnadaha
zhongshuomach mach @ 163.com